China Diffuser ပုလင်းစက်ရုံ၊ Diffuser ပုလင်းရောင်းချသူ
Luxury Round Crystal 10oz 293ml စိတ်ကြိုက်ပြန်ဖြည့်နိုင်သော Diffuser ရေမွှေးဖန်ပုလင်း
1. High-end ရနံ့ကုထုံးပုလင်း၊ diffuser ပုလင်း၊ ကြော့ရှင်း၊ လှပပြီး စွယ်စုံရ၊ ကြည်လင်ပြတ်သားသည်။
2. ရိုးရှင်းသောပုံစံ၊ အိမ်တွင်အလှဆင်ပါ။ ရနံ့ကုထုံးဖြင့် အနံ့ဆိုးများကို ဖယ်ရှားနိုင်သည်။
5. ဦးထုပ်/ ကြိမ်ချောင်း/ ဖိုက်ဘာချောင်း/ ရော်ဘာဆို့စသည့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများလည်း ရရှိနိုင်သည်။သင်လိုချင်သော ပြင်းထန်မှုပမာဏကို ရရန် ကျူပင်များကို ထည့်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့် အနံ့၏ပြင်းထန်မှုကို အလွယ်တကူ ချိန်ညှိရန် လွယ်ကူသည်။
6. ကျူတုတ်များကို diffuser ပုလင်းထဲသို့ထည့်ပါ။အမွှေးနံ့သာဆီ ကြိုက်သလောက်ထည့်ပါ။ကျူတုတ်များသည် ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး လေကောင်းလေသန့်ရရန် မွှေးရနံ့ကို ဖြည်းညှင်းစွာ ထုတ်ပေးနိုင်သည်။
58ml 135ml 107ml 179ml 4.5oz 6oz စိန်ပုံစံ အဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန် အမွှေးနံ့သာ ဖန်ပုလင်း
1. အဆင့်မြင့်ရနံ့ကုထုံးပုလင်း၊ အနံ့ခံပုလင်း၊ ကြော့ရှင်းပြီး စွယ်စုံရ၊ ကြည်လင်ပြတ်သားသည်။
2. ရိုးရှင်းသောစတိုင်၊ အိမ်တွင်အလှဆင်ရန်၊ ကား diffuser ပုလင်းများ။ရနံ့ကုထုံးဖြင့် အနံ့ဆိုးများကို ဖယ်ရှားနိုင်သည်။
5. ဦးထုပ်/ ကြိမ်ချောင်း/ ဖိုက်ဘာချောင်း ကဲ့သို့သော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုလည်း ရရှိနိုင်သည်။သင်လိုချင်သော ပြင်းထန်မှုပမာဏကို ရရန် ကျူပင်များကို ထည့်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့် အနံ့၏ပြင်းထန်မှုကို အလွယ်တကူ ချိန်ညှိရန် လွယ်ကူသည်။
Luxury Crystal Diamond 2oz 61ml 3oz 86ml Refill Aromatherapy Reed Diffuser ဖန်ပုလင်း
1. အရည်အသွေးမြင့် ရနံ့ကုထုံးပုလင်း၊ ကျူပြူဆေးပုလင်း၊ ကြော့ရှင်းပြီး စွယ်စုံရ၊ ကြည်လင်ပြတ်သားသည်။
အိမ်သုံးအလှဆင် Crystal 3.5oz 102ml 105ml 212ml 7oz Square Shape Reed Diffuser Glass ပုလင်းများ
ဇိမ်ခံ 3.5oz 106ml 141ml 5oz Aroma Reed Diffuser ဖန်ပုလင်း
4. ပုလင်းများ၏ ပမာဏမှာ 106ml၊ 141ml ဖြစ်သည်။
Stocks Spherical Shape 55ml 106ml 120ml Car Air Fresher Diffuser Glass Bottle with Diffuser
2. ရိုးရှင်းသောပုံစံ၊ အိမ်တွင်အလှဆင်ခြင်း၊ ကားရေသန့်ဗူးများ။အနံ့ကုထုံးဖြင့်၊ အနံ့ဆိုးများကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။
73ml 2.5oz 98ml 3.3oz 143ml 4.8z 156ml 5.3oz Clear Glass Essential Oil Reed Diffuser ပုလင်း လက်ကား
2. ရိုးရှင်းသောစတိုင်၊ အိမ်အလှဆင်ရန်၊ ကား diffuser ပုလင်းများစသည်တို့။ရနံ့ကုထုံးဖြင့် အနံ့ဆိုးများကို ဖယ်ရှားနိုင်သည်။
6. သင်လိုချင်သောပြင်းထန်မှုပမာဏကိုရရန် ကျူပင်များကိုထည့်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့် အနံ့၏ပြင်းထန်မှုကို အလွယ်တကူချိန်ညှိရန် လွယ်ကူသည်။
7. ကျူတုတ်များကို ကျူလုံးရေဘူးအတွင်း ထည့်ပါ။အမွှေးနံ့သာဆီ ကြိုက်သလောက်ထည့်ပါ။ကျူတုတ်များသည် ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး လေကောင်းလေသန့်ရရန် မွှေးရနံ့ကို ဖြည်းညှင်းစွာ ထုတ်ပေးနိုင်သည်။၎င်းတို့သည် နေ့စဉ်သုံး၊ မင်္ဂလာဆောင်၊ ပွဲလမ်းသဘင်များ၊ Spa၊ တရားထိုင်ခြင်း၊ ရေချိုးခန်းဆက်တင်များအတွက် ပြီးပြည့်စုံပါသည်။
ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောစျေးနှုန်း Sphere Glass 7.5oz 283ml အိမ်တွင်းရှိ Indoor Reed Diffuser ပုလင်း
1. အဆင့်မြင့် ရနံ့ကုထုံးပုလင်း၊ ကျူပြူဆေးပုလင်း၊ ကြော့ရှင်းပြီး စွယ်စုံရ၊ ကြည်လင်ပြတ်သားသည်။
2. ရိုးရှင်းသောစတိုင်၊ အိမ်နှင့်ကား diffuser ပုလင်းများကိုအလှဆင်ပါ။ရနံ့ကုထုံးဖြင့် အနံ့ဆိုးများကို ဖယ်ရှားနိုင်သည်။
လူကြိုက်အများဆုံး ဗလာ 1.5oz 63ml 2oz 81ml 3oz 115ml 48ml 96ml Square Reed ကားအိမ်သုံး Diffuser ပုလင်းများ
2. ရိုးရှင်းသောစတိုင်၊ အိမ်တွင်အလှဆင်ထားသောကား၊ ကားရေသန့်ဘူးများ။ အနံ့ကုထုံးဖြင့် အနံ့ဆိုးများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။
လက်ကား 2oz 59ml 3.5oz 113ml 6.5oz 164ml 232ml 290ml Empty Car Square Reed Aroma Diffuser Bottle
6. ကျူတုတ်များကို diffuser ပုလင်းထဲသို့ထည့်ပါ။အမွှေးနံ့သာဆီ ကြိုက်သလောက်ထည့်ပါ။ကျူတုတ်များသည် ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး လေကောင်းလေသန့်ရရန် မွှေးရနံ့ကို ဖြည်းညှင်းစွာ ထုတ်ပေးနိုင်သည်။၎င်းတို့သည် နေ့စဉ်သုံး၊ မင်္ဂလာဆောင်၊ ပွဲလမ်းသဘင်များ၊ Spa၊ တရားထိုင်ခြင်း၊ ကားရေသန့်ဘူးများ၊ ရေချိုးခန်းဆက်တင်များအတွက် ပြီးပြည့်စုံပါသည်။
Flat Square Shape 1.5oz 43ml 4oz 130ml 138ml ကြိမ်ချောင်းများဖြင့် Reed Diffuser Glass Bottle
4. ပုလင်းများ၏ ပမာဏမှာ 43ml 130ml 138ml ဖြစ်သည်။
7. ကျူတုတ်များကို diffuser ပုလင်းထဲသို့ထည့်ပါ။အမွှေးနံ့သာဆီ ကြိုက်သလောက်ထည့်ပါ။ကျူတုတ်များသည် ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး လေကောင်းလေသန့်ရရန် မွှေးရနံ့ကို ဖြည်းညှင်းစွာ ထုတ်ပေးနိုင်သည်။၎င်းတို့သည် နေ့စဥ်အသုံးပြုမှု၊ မင်္ဂလာဆောင်၊ ပွဲလမ်းသဘင်များ၊ Spa၊ တရားထိုင်ခြင်း၊ ရေချိုးခန်းအပြင်အဆင်၊ ကားရေသန့်ဘူးများ၊ စသည်တို့အတွက် ပြီးပြည့်စုံပါသည်။
ဘီယာ ဖန်ပုလင်း, ဖန်ရည်ပုလင်းများ, ဖျော်ရည်အတွက် ဖန်အိုး, ဖန်ပုလင်းအချိုရည်, Glass Bbq Sauce ပုလင်းများ, Reed diffuser ပုလင်း,